ဇူလိုင်လ 2018 - စာမျက်နှာ6- NAB Show ကိုသတင်းထုတ်လွှင့် Beat အသုံးပြုပုံ NAB ပြရန်၏တရားဝင်ထုတ်လွှင့် - NAB Show ကိုတိုက်ရိုက်
Home » 2018 » ဇူလိုင်လ (စာမျက်နှာ 6)
ALBTELECOM NEW IPTV ဝန်ဆောင်မှုများကိုစတင်ရန် ANEVIA ရှေးခယျြ
Anevia, OTT နှင့် IPTV software ကိုဖြေရှင်းချက်တစ်ခုဦးဆောင်ပံ့ပိုးပေးပိုပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ကြည့်ရွေးချယ်စရာများအတွက်စာရင်းပေးသွင်းထားသူဝယ်လိုအားအောက်ပါ, Albanian အဘိဓါန်ဆက်သွယ်ရေးအော်ပရေတာ ALBtelecom အသစ် IPTV န်ဆောင်မှုများပစ်လွှတ်ထောက်ခံခဲ့သည်။ ALBtelecom ယခုထုတ်လွှင့်အရည်အသွေးနဲ့မျိုးစုံဖန်သားပြင်မှတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှနှင့် Non-linear အကြောင်းအရာများကို Anevia ရဲ့တီဗီနှင့်ဗီဒီယိုဖြန့်ဝေ software ကိုအသုံးပြုနေသည်။ ALBtelecom အယ်လ်ဘေးနီးယား၏အကြီးဆုံးတယ်လီဖုန်းဆက်သွယ်ရေးသည် ...
core SWX Emmy®ဆုရ Filmmaker အန်ဒီ Casagrande နှင့်အတူ "ငါးမန်းအပတ်" 2018 ထဲသို့ Dives
Cape Town, တောင်အာဖရိက, ဇူလိုငျ 30, 2018 - Emmy®ဆုကို-အနိုင်ရတောရိုင်းတိရစ္ဆာန်ရိုက်ကူးရေးခေါင်းဆောင်အန်ဒီ Casagrande များအတွက်ကမ္ဘာမြေပေါ်တွင်အသေအပျောက်အများဆုံးငါးမန်းတွေနဲ့အနီးကပ်နှင့်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးတက်ရတဲ့ရုံးမှာပဲအခြားသောနေ့ရက်ဖြစ်ပါတယ်။ Casagrande ရဲ့ဝန်ဆောင်မှုများကိုက၎င်း၏အကျယ်လူကြိုက်များ၏ Discovery Channel ကိုဖွင့် 30th အရစ်ကျဘို့ပဌနာခဲ့ကြသည့်အခါ "ငါးမန်းအပတ်" ဟုသူကစာသား, အခွင့်အလမ်းမှာချိုးငှက်။ အဆိုပါရေအောက်ဖမ်းဆီးဖို့ ...
Pebble သဲသောင်ပြင်စနစ်များသည်၎င်း၏ Orcas virtual ပလေးအောက်ပလက်ဖောင်းပေါ် Singular.Live တိမ်တိုက်-based ဂရစ်ဖစ်အတူပေါင်းစည်းရေးပြ
Weybridge, ဗြိတိန်, ဇူလိုင်လ 30th, 2018 - IBC 2018 မှာတဲ 8.B68 ပေါ် Pebble သဲသောင်ပြင်စနစ်များ, တစ်ဦးဦးဆောင်အလိုအလျောက်, content တွေကိုစီမံခန့်ခွဲရေးနှင့်ပေါင်းစပ်ရုပ်သံလိုင်းအထူးကု၎င်း၏ virtualized ပလေးအောက်နှင့်အတူ Singular.Live cloud-based ဂရပ်ဖစ်များ၏ပေါင်းစည်းမှုကိုသရုပ်ပြပါလိမ့်မယ် ဖြေရှင်းချက် Orcas ။ cloud-based ကို virtual လိုင်းများအဘို့, ဂရပ်ဖစ်ထူးခြားသောစိန်ခေါ်မှုများကိုတင်ပြနိုင်ပါတယ်။ Pebble ရဲ့ Orcas ထုတ်လွှင့်နေတဲ့အကွာအဝေးပေးခြင်း 3rd ပါတီများအနေဖြင့်မျိုးစုံဂရပ်ဖစ် packages များထောက်ခံပါတယ် ...
MultiDyne SilverBack V ကိုအတူအိုင်ပီ-Enhanced ကင်မရာ-သို့ပြန်သွားရန် Fiber ပို့ဆောင်ရေးအတွက်မြေပြင်ချိုး
ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်, 12G-နိုင်စွမ်း, ကင်မရာ-တပ်ဆင်ထားဖြေရှင်းချက်ကျစ်လစ်သိပ်သည်းပေါ့ပါးသစ်ကိုပုံစံအချက် Hauppauge, နယူးယော့, ဇူလိုင်လ 30, 2018 နှင့်အတူရှေ့ဆက်-ရှာဖွေနေအိုင်ပီနဲ့အမျှင်ဓာတ်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးဆုံပေါင်းစပ် - MultiDyne fiber optic Solutions ဥရောပပွဲဦးထွက် ofSilverBack V ကိုအဖြစ် IBC2018 designated ထားပါတယ်, အ ကင်မရာ-တပ်ဆင်ထားဖိုင်ဘာသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးဖြေရှင်းချက်၎င်း၏ရေပန်းစား SilverBack စီးရီးအတွက်နောက်ဆုံးပေါ်ဆန်းသစ်တီထွင်မှု။ အဆိုပါစက်မှုလုပ်ငန်းရဲ့ပထမဦးဆုံး 12G- နှင့်တစ်ဦးထည့်သွင်းဖို့ 4K-နိုင်စွမ်းကင်မရာ-ပြန်စနစ်က ...
စားသုံးသူနည်းပညာအတွက်အမျိုးသမီးများအထူးဧည့်သည် Lisa ကို Loeb နှင့်အတူ 10th နှစ်ပတ်လည် CEDIA နေ့လယ်စာစားပွဲအိမ်ရှင်အဖြစ်
တက်ရောက် Lisa ကို Loeb LAFAYETTE, Colo နှင့်အတူ Music နဲ့စကားပြောခံစားကြည့်ပါဦးမည် - ။ ဇူလိုင်လ 30, 2018 - စားသုံးသူနည်းပညာ (WiCT), စားသုံးသူနည်းပညာစက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်အမျိုးသမီးများတိုးမြှင့်တင်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုအတွက်အမျိုးသမီးများကယနေ့ပြုလုပ်စဉ်အတွင်း Lisa ကို Loeb အိမ်ရှင်အဖြစ်လက်ခံကျင်းပလိမ့်မည်ဟုကြေငြာခဲ့သည် 10th နှစ်ပတ်လည် CEDIA နေ့လယ်စာစားပွဲအဖြစ်အပျက်။ အဆိုပါ San Diego မှကွန်ဗင်းရှင်းစင်တာများ၏ Ballroom 7A တှငျကငျြးပခဲ့စက်တင်ဘာ6...
IBC2018 မှာနယူး Automated Podcasts ကူးယူမှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့်စာတန်းထိုးခင်းကျင်းပြပေးပါရန် StreamGuys
ENCO enCaption နည်းပညာ BAYSIDE, California, ဇူလိုင်လ 30, 2018 စွမ်းအားဖြင့် SGrecast တိုက်ရိုက်စီးမှတ်တမ်းတင်အတွက် features အသစ်၏ဥရောပပွဲဦးထွက် feature မှဆန္ဒပြပွဲများနှင့်ပလက်ဖောင်း repurposing - အဆိုပါလာမည့် IBC2018 ပြပွဲထဲမှာအသစ်သောအသံကူးယူ features တွေ၏ဥရောပပွဲဦးထွက်များအတွက်နောက်ခံပေးသွားမှာပါ ဖြေရှင်းချက်ရှေ့ဆောင် StreamGuys streaming ထံမှ rebroadcasting နှင့် podcast တခုကိုစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်အ SGrecast တိုက်ရိုက်စီး repurposing ။ ...
ကို Creative ထုတ်လုပ်သူ / ထုတ်လုပ်ခြင်းအထူးကု
ရာထူး: ကို Creative ထုတ်လုပ်သူ / ထုတ်လုပ်ခြင်းအထူးကုကုမ္ပဏီ: အနီရောင် Cube Productions တည်နေရာ: Burlingame, CA အမေရိကန်အနီရောင် Cube ထုတ်လုပ်မှုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဗီဒီယိုထုတ်လုပ်ရေးဌာနများအတွက်ဖန်တီးမှုထုတ်လုပ်သူရှာကြံနေပါတယ်။ ကျနော်တို့က high-quality ဗီဒီယိုများထုတ်လုပ်တစ်ဦးအစာရှောင်ခြင်း-PACE ပတ်ဝန်းကျင်တွင်ဖိအားအောက်တွင်ကောင်းစွာအလုပ်လုပ်နိုင်သူတစ်စုံတစ်ဦးကိုရှာကြ၏။ , ဗီဒီယိုအကြောင်းအရာကိုဖန်တီးခြင်းထုတ်လုပ်မှု၏အားလုံးအဆင့်တဆင့်အလုပ်လုပ်ကိုင်ခြင်းနှင့်သတ်မှတ်ရက်တွေ့ဆုံရန်နိုင်ပါတယ်အတွေ့အကြုံ။ တစ်စုံတစ်ဦးကသူကို ...
အဖြူရောင်ခုနှစ်တွင်ခန္ဓာကိုယ် (BIW) ဆိုင်ထုတ်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်းအင်ဂျင်နီယာချုပ်
ရာထူး: အဖြူရောင်ခုနှစ်တွင်ခန္ဓာကိုယ် (BIW) ဆိုင်ကုန်ထုတ်လုပ်မှုအင်ဂျင်နီယာကုမ္ပဏီ: အဆိုပါ PAC Group မှတည်နေရာ: Troy MI အမေရိကန်အင်္ဂလိပ် CV ကိုတင်ပြပါ။ White ကဆိုင်ထုတ်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်းအင်ဂျင်နီယာချုပ် Greenfield / Brownfield Automotive Facility တပ်ဆင်ခြင်းခုနှစ်တွင် PAC Group မှ -Body - ဂလိုဘယ်သင်ကမ္ဘာတဝှမ်းသင်ယူနိုင်သည်ကိုတိုတောင်းသောသို့မဟုတ်ရေရှည်တာဝန်တွေရှာဖွေနေပါသလား? အဆိုပါ PAC Group မှအဖြူရောင်တစ်ဦးကခန္ဓာကိုယ်ရှာကြံနေပါတယ် ...
ရာထူး: ခဲဂရပ်ဖစ်ဒီဇိုင်နာကုမ္ပဏီ: ထဲကတည်နေရာရှိပါတယ်အမှတ်တံဆိပ်: အတ္တလန်တာ GA အမေရိကန်ထဲကရှိတယ်အမှတ်တံဆိပ်ဒီကြီးထွားလာကုမ္ပဏီ join ဖို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့နောက်အဖွဲ့ကအဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးကိုရှာဖွေနေသည်။ ပြီးခဲ့သည့် 110 နှစ်ပေါင်းတစ်နှစ်ကျော်တစ်ဦး 3% ကြီးထွားတစ်နှစ်နှင့်အတူကျနော်တို့၏ 2019.The အနေအထားအတွက်ကျွန်တော်တို့ကိုအပြည့်အဝအချိန် join ဖို့အခွင့်အလမ်းရှိသည်မယ်လို့သူတစ်ဦးအခြိနျပိုငျးဒီဇိုင်နာရှာနေကြပါသည် ...
ဗီဒီယိုကိုအကြောင်းအရာ Editor ကို
ရာထူး: ဗီဒီယိုအကြောင်းအရာ Editor ကိုကုမ္ပဏီ: Hybrid ကိုကွန်ယက် LLC တည်နေရာ: ဝါရှင်တန်ဒီစီအမေရိကန်ပို >>
ဂရပ်ဖစ်ဒီဇိုင်းစတူဒီယို & ပရင့်ထုတ်ရန်ဆိုင်မှာ CSR / အဒ်မင်
ရာထူး: Mindzai ကို Creative တည်နေရာ: ဂရပ်ဖစ်ဒီဇိုင်းစတူဒီယို & ပရင့်ထုတ်ရန်ဆိုင်ကုမ္ပဏီမှာ CSR / အဒ်မင် Austin TX အမေရိကန်ကိုသင်လက်ခံ & အနုပညာမြှင့်တင်ရန်ကြောင်းဖန်တီးမှုများအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ join ဖို့ရှာဖွေနေနေသင်အတွက်အရည်အသွေး, လက်ရာလက်နှင့်အပြုသဘောအသိအမှတ်ပြုမှုဘို့ကြိုးစားကြသည်သလား? သင်ပြုအလုပ်မလုပ်သအသေးစိတ်ရန်စိတ်အားထက်သန်အာရုံစူးစိုက်မှုရှိပါပေမယ့်နေဆဲနိုင်စွမ်းထိနျးသိမျးထားနိုငျ ...
ရာထူး: ဗီဒီယိုအကြောင်းအရာဖန်ဆင်းရှင် Internship ကုမ္ပဏီ: Dot အီလက်ထရောနစ်အားကစား (GAMURS Group မှ) တည်နေရာ: Austin TX အမေရိကန်ပို >>
ရာထူး: Studio ကလက်ထောက်ကုမ္ပဏီ: ဂျိမ်း Brandess စတူဒီယို & ပြခန်း, Inc တည်နေရာ: Saugatuck MI အမေရိကန်ဂျိမ်း Brandess စတူဒီယို & ပြခန်း, Inc, Saugatuck အတွက်မီချီဂန်အနည်းငယ်ကောင်းသောလူများအတွက်ရှာဖွေနေသည်။ အပိုင်းအချိန်နှင့်အချိန်ပြည့်ရာထူးရရှိနိုင်ပါသည်။ အချိန်ပြည့်တစ်နာရီကို $ 12.50 နှင့် $ 14.50 အကြားလစာအကွာအဝေး စတင်. နှင့်အတူကျန်းမာရေးအာမခံပါဝင်သည်။ အားလုံးရာထူးများအတွက်အထောက်အကူဖြစ်စေလက်လီအရောင်းအတှေ့အကွုံ။ ...
မီဒီယာ Update ကိုအချက်ပေးဇူလိုင်လ 27, 2018 - GatesAir, ကြိုးမဲ့အတွက်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာခေါင်းဆောင်, ရေဒီယိုနှင့်ရုပ်မြင်သံကြားထုတ်လွှင့်မှုအတွက် Over-the-air အကြောင်းအရာပေးပို့ဖြေရှင်းနည်းများ, ကာတာအတွင်းကြီးမားသောရေဒီယိုအနိုင်ရရှိကြေငြာလိုက်သည်။ salam မီဒီယာသို့ကာစ် - ကာတာနိုင်ငံမလိုအပ်တဲ့ Dual-စိတ်လှုပ်ရှား configurations နှင့်အတူလေးက high-ထိရောက်မှု Flexiva ဖက်စ် 5kW FM ရေက transmitter ဝယ်ယူခဲ့သည်။ GatesAir ယှဉ်ပြိုင် Flexiva ရဲ့ယုံကြည်စိတ်ချရသောနှင့်ထိရောက်သောလေကြောင်းရန်-အအေးနည်းပညာကြောင့်စာချုပ်, အနိုင်ရ ...
Dielectric Repack Initiatives များအတွက်အနိမျ့-Band VHF စနစ်များဖွံ့ဖြိုး
နယူးဖြေရှင်းချက် packages များလှိုင်းနှုန်းသည် UHF-to-VHF အမိန့်ဖြည့်ဆည်းဖို့အထူးပြု filter များနှင့်အတူလက်စွပ်-စတိုင် FM ရေအင်တင်နာတည်ဆဲ Raymond, မိန်း - ဇူလိုင်လ 27, 2018 - Dielectric, တီဗီနှင့်ရေဒီယိုထုတ်လွှင့်မှုအတွက်ရည်ရွယ်ချက်-အင်ဂျင်နီယာအင်တာနာများနှင့် RF စနစ်များ၏ဦးဆောင်ထုတ်လုပ်သူ, အကိုကြေညာ လိုင်းများ4နှင့်5မှတိကျတဲ့အသစ်အနိမ့်တီးဝိုင်း VHF စနစ်များကိုချက်ချင်းရရှိနိုင်မှု။ ပြီးပြည့်စုံသောဖြေရှင်းချက် Dielectric ရဲ့ circularly သဘောကွဲလွဲ DCR-မေး FM ရေလက်စွပ်-စတိုင် packages ...
6 ၏စာမျက်နှာ 55«ပထမဦးစွာ...«45678	»	102030...နောက်ဆုံး»